What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ndingazi njani ukuba umntwana wam une- COVID-19? Yaye kufuneka ndenze ntoni? – Messages for Mothers
What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ndingazi njani ukuba umntwana wam une- COVID-19? Yaye kufuneka ndenze ntoni?
: Umntwana wakho angana une- COVID-19 ukuba unezi mpawuhave: uyakhohlela, unomqala obuhlungu, uphelelwa ngumoya, akakwazi kunukisa nokuva incasa yento, abe enomkhuhlane okanye engenawo, abenezihlunu eziqaqambayo kunye notyatyazo. Umntwana kwakhona angaba unosuleleko lwe-COVID-19 abe ephilile engenazo naziphi iimpawu.
← Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ndive ukuba kukho amanye amayeza kunye nezinto nezinto ezilungisa loo meko endingazinika umntwana wam ukubanqanda ukuba bangangenwa yi- COVID-19 – yinyaniso? → How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Umntu ophilileyo obekufutshane nomntu obesaziw ene-COVID-19 anganalo usuleleko. Yintoni ongayenza?